Quicklink Studio broadcasts exclusive interviews for prestigious English Football Club – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » Quicklink စတူဒီယိုဂုဏ်သတင်းအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကလပ်များအတွက်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထုတ်လွှင့်
အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်ဆင့်အတွက်ကစားအခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကလပ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဧည့်သည်စတူဒီယိုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Audio / Video အင်တာဗျူး link ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးပံ့ပိုးတဲ့ desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာကို SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ထွက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါဘောလုံးကလပ်ကမ္ဘာကြီးကိုဘောလုံးအတွက်အများဆုံးဂုဏ်သတင်းကလပ်အသင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကလပ်ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် operated စာရင်းသွင်းခြင်း-based ရုပ်သံလိုင်းရှိပါတယ်။ ကစားသမားများနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်ပရိတ်သတ်တွေသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထိပ်တန်းဆင့်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးပွဲ, ဘောလုံးသတင်းနှင့်အခြားရေးရာ programming ကို။
Quicklink ၏ရစ်ချတ် Rees CEO ဖြစ်သူ "ကပြောပါတယ်ပို. ပို. ဘောလုံးအဖွဲ့အစည်းများတကမ္ဘာလုံးဒီရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်အတွက်အစစ်အမှန်တန်ဖိုးကိုသဘောပေါက်နေကြတယ်။ အဆိုပါမျှဝေသူအဘို့အလိုမရှိ, software ကို downloads, နှင့်အတူ, သီးသန့်အရည်အသွေးမြင့်ပန်ကာအင်တာဗျူးတွေကိုအလွယ်တကူအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်ပရိတ်သတ်တစ်ခုတည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ-to-air "လိုအပ်မျှ login နှင့်အတူအတူစတူဒီယိုသို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ရစ်ချတ် "ကထပ်ပြောသည်ဧည့်သည်များအချိန်တရားဝင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကို SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကဲ့သို့တဦးတည်းအချိန် URL ကိုစလှေတျတျောနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစတူဒီယိုအတွက်ပံ့ပိုး Audio / Video setting များကိုအပြည့်အဝဝေးလံသောစီမံခန့်ခွဲမှုကသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ပင်ပြန် / ရှေ့ကင်မရာရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖယ်ရှားရာမှာပဲ့တင်သံဖျက်သိမ်းခြင်း "မနားကြပ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုဖွင့်တဲ့ web browser ကိုသုံးပြီးမည်သည့် desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာမှ Ultra-အနိမ့်နှောင့်နှေးပံ့ပိုးမှုများကိုခွင့်ပြုမယ့် bi-directional Audio / Video ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ မျှဝေသူများ SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ခံရနိုင်ပြီးအဝေးမှအလွယ်တကူစတူဒီယိုမှအကြောင်းအရာများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုနှင့်အခြား Quicklink ထုတ်ကုန်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ.
quicklink အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
AzamTV adopt Quicklink Mobile Encoder for live news gathering - ဧပြီလ 29, 2019
Quicklink Studio empowers Veolia press day between France, Poland & Morocco - ဧပြီလ 23, 2019
Quicklink စတူဒီယိုဂုဏ်သတင်းအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကလပ်များအတွက်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထုတ်လွှင့် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2019
ဘောလုံး အင်တာဗျူး Quicklink Quicklink စတူဒီယို အားကစား တီဗီနည်းပညာ	2019-02-11
ယခင်: IB2S Active ကိုစတူဒီယိုမော်နီတာ၏ PMC မိတ်ဆက်နယူးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
နောက်တစ်ခု: NEP Connect ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားနှင့်အတူသစ်ကို Pro14 ရပ်ဘီဆက်သွယ်မှုစာချုပ်ကိုကြေညာ